China Cod Fish Collagen Peptide ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ngwaahịa | Huayan
Ngwaahịa: akwa dị ọcha, enweghị mgbakwunye, peptide collagen dị ọcha ， ọ na-esi isi nke ọma ma na-atọ ụtọ nke ukwuu.
Ngwugwu: 10KG / Bag, 1bag / katọn, ma ọ bụ ahaziri.
Nrụpụta nke cod collagen peptide:
Mee ka akpụkpọ ahụ sie ike ma wepu ahịhịa: mezie dermis mebiri emebi, mee ka akpụkpọ ahụ sie ike ma mee ka anụ ahụ dị nro;
Igbu oge ịka nká: imeziwanye na ịkwalite ịmịkọrọ akpụkpọ;
Whitening na ìhè ntụpọ: inhibiting tyrosinase ọrụ, si otú inhibiting melanin deposition na mee ngwangwa akpụkpọ metabolism.
Ọkpụkpụ na nkwonkwo siri ike: wusie ike ma melite nhazi nke ọkpụkpụ na nkwonkwo, weghachite ọkpụkpụ ndị mebiri emebi, mee ka ọgbọ dịkwuo elu, ma tinyekwuo calcium n'ụzọ dị irè karị.
Moisturize ntutu na mbọ: gbochie ihicha ntutu, ime ihe na-eme ka mbọ dị nro na-egbuke egbuke;
Mee ka ụra dịkwuo mma: o nwere amino acid iji meziwanye ụra ụra, mee ka irighiri akwara kwụsị ma kwalite ụra miri emi.
1.Strict technology usoro
Nke gara aga: Earthworm peptide
Osote: Mmiri Azụ Oligopeptide